Haweeney in ka badan 20 sano u ololeysa dhowridda deegaanka - BBC News Somali
Haweeney in ka badan 20 sano u ololeysa dhowridda deegaanka
Lahaanshaha sawirka Cabdullaahi Jaamac
Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo ah wasiirka daryeelka iyo horumarinta deegaanka ee Jamhuuriyadda Iskeed ugu Dhawaaqday Madaxbannaanida ee Somaliland, waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha deegaanka muddo ka badan 20 sano, taas oo ay abaalmarin ku muteysatay.
Waxay sanadkan ka mid noqotay 22 qof oo afar ka mid ah ay kasoo jeedaan Afrika oo loo xushay inay si gaar ah uga qaybgalaan shirweyne caalami ah oo looga hadlayay arrimaha deegaanka oo ka dhacay dalka Maraykanka, kaddib markii loo aqoonsaday in daryeelka deegaanka dunida ay wax ka tareen gaar ahaanna dalalkooda.
Waxay ka mid tahay haweenka tirada yar ee u ololeeya arrimaha deegaanka, "Deegaan waa nolosha, waa wax walba oo kugu xeeran, sida waxaad cuneyso, cabeyso, dhulkaad ku socoto, cadceedda kuu soo baxaysa, hawada aad neefsaneyso iyo noloshaada oo dhan" ayay tiri Shukri oo BBC-da uga warrantay khibraddeeda ku aaddan deegaanka, iyo intii ay u ololeyneysay.
Keymaha dhirta DRC oo laga digay inuu xaaluf soo gaaro
Waxyaabihii taariikhda reebay ee ay deegaanka ka qabatay waxaa ka mid ah inay ka qayb qaadatay isbeddel weyn oo lagu sameeyay buurta Gacan Libaax oo dowladdii hore ee Siyaad Barre ahayd meel loo dalxiis tago, balse burburkii kaddib ayay nabaad guurtay. Shukri oo madax ka ahayd hay`adda Candle Light oo arrimaha deegaanka ka shaqeysa ayaa door weyn ku yeelatay soo celinta buurtaas Gacan Libaax.
"Sanadkii 1999 ayaan buurta dusheeda ku qaadannay cashar ku saabsan deegaanka, taas ayaana igu dhalisay inaan u ololeeyo" ayay tiri.
Deegaannada Jamhuuriyadda Iskeed ugu Dhawaaqday Madaxbannaanida ee Somaliland, dhowridda deegaanka waxaa la sheegay inay kaga wanaagsan yihiin meelaha kale ee dalka.
Image caption Shukri waxay u ololeysaa in dhirta la beero si uusan dhulku xaaluf u noqon
Isticmaalka bacda ayaa ka mid ah waxyaabaha mamnuuca ka ah Somaliland, Shukri ayaana ka mid ahayd dadkii u ololeeyay in la joojiyo, iyadoo la dhowrayo deegaanka.
Shukri waxay jeceshahay in laga hortago cimilada isbaddaleysa ee adduunka oo ah shaqada ay imika qabato, waxayna doonaysaa in ay ka mid noqoto dadka hormuudka u ah in lala tacaalo isbeddelka cimilada.